SAADAASHII U DAMBAYSAY: Man United & Chelsea Oo Usoo Baxaya Champions League - Khabiirka Mark Lawrenson Oo Shaaciyey Saadaasha Kulamada Xaasaasiga Ah Ee Axadda - Gool24.Net
SAADAASHII U DAMBAYSAY: Man United & Chelsea Oo Usoo Baxaya Champions League – Khabiirka Mark Lawrenson Oo Shaaciyey Saadaasha Kulamada Xaasaasiga Ah Ee Axadda
Horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League ayaa lasoo afjari doonaa Axadda, waxaanu dagaal weyn ka taagan yahay boosaska saddexaad iyo afraad oo ay saddex kooxood ku xafiiltamayaan iyo waliba kaalmaha xiga ee loogu soo baxayo tartanka Champions League.
Kooxaha Premier League ayaa si adag iskugu diyaarinaya kulanka ugu dambeeya xili ciyaareedka, waxaanay dunida oo dhan isha ku hayn doontaa dhawr kulan oo ay ugu weyn yihiin labada ciyaarood ee Leciester City vs Manchester United iyo Chelsea vs Wolverhampton, laakiin kalidood maaha.
Kulanka ay Tottenham la ciyaarayso Crystal Palace ayaa udub dhexaad u noqon doona dagaalka kooxaha tegaya Europa League, waxaanu Mourinho ku ducaysanayaa in Chelsea ay ka badiso Wolves oo hal dhibic ka sarraysa si ay kooxdiisu uga qayb geli karto Europa League.
Manchester United oo ku jirta kaalinta saddexaad ayaa u tegaysa Leicester City oo dhibic kaliya ka dambaysa, kaalinta shanaadna fadhida, waxaana Red Devils ay rajadeeda Champions League ee xili ciyaareedkani ku xidhan yahay inay guul kusoo gaadho King Power Stadium si ay kaalinta saddexaad ugu soo baxdo ama ay barbarro gasho si ay saddexaad ugu fasaxdo Chelsea oo ay iyaguna afraad ugu jiraan.
Laakiin haddii Leicester City badiso, waxay Manchester United ka hadhi doontaa tartanka Champions League, halka ay Foxes soo raaci doonto Liverpool, Man City iyo Chelsea.
Sidaas oo kale, Chelsea ayaa wax ku leh inay guuleysato, sababtoo ah, waxay isku dhibco yihiin Manchester United oo farqiga goolasha kaga haysa kaalinta saddexaad.
Kooxda tababare Lampard ayaa ka hadhi doonta horyaalka haddii ay khasaare kala kulanto ciyaarta Wolves, sidoo kalena ay Leicester ka badiso Man United.
Haddii ay sidan dambe dhacdo, Chelsea waxay u degi doontaa kaalinta shanaad, halka Leicester City ay saddexaad kusoo bixi doonto, Man United na kaalinta afraad, balse Blues ayaa soo gudbi karta xataa haddii ay khasaare la kulanto laakiin ay Man United guul ka keento ciyaarta Leicester ay u tegayso.
Marka laga yimaaddo kaalmahan dagaalka Champions League ka taagan yahay, waxa sidaas oo kale ay kooxuhu maryo dhiig leh ugu kala furanayaan boosaska Europa League.
Wolves oo u tegaysa Chelsea ayaa u baahan inay guuleysato si ay u xaqiijisato booskeeda Europa League ee xili ciyaareedka dambe, sababtoo ah waxay hal dhibic ka horreysaa Tottenham, laakiin Spurs oo toddobaad fadhida ayaa iyaguna raadin doona guul si ay uga sare mari karaan Wolves haddii ay ku guul-darraystaan kulanka Chelsea ama ay barbarro galaan.
Figta ugu sarraysa ayaanay wax dood ahi ka taagnayn maadaama ay koowaad kusoo baxday Liverpool oo horyaalka ku guuleysatay iyo Manchester City oo waqti hore xaqiijisatay kaalinteeda labaad.
Saddex kooxood oo salka hoose fadhiya ayaa iyagana ay midkooda kali ahi ka badbaadi kartaa inay dib ugu noqoto heerka labaad, iyadoo xilli horena Norwich ay xaqiiqsatay inay Championship-ka ka ciyaari doonto fasal ciyaareedka dambe.
Laakiin Norwich waxay sugaysaa in laba ka mid ah saddexda kooxood ee Bournemouth, Aston Villa iyo Watford ay soo raacaan oo ay heerka labaad u wada degaan.
Bournemouth ayaa xaaladdu ku xun tahay, waxaanay saddex dhibcood ka dambaysaa Aston Villa iyo Watford oo min 34 dhibcood haysta, waxaanay u muuqataa in Bournemouth aanay wax fursad ah haysan maadaama ay la ciyaarayso Everton.
Labada kooxood ee kale ayaa xataa rajadoodu ku xidhan tahay tirada goolasha laga badiyo ama ay ku badiyaan, haddii ay barbarreeyaanna sidoo kale.
Watford ayaa u tegaysa Arsenal oo ka cadhaysan guul-darradii kasoo gaadhay kulankii ay Aston Villa kusoo garaacday 1-0 Salaasadii, waxaanu Arteta doonayaa inuu cagta sii mariyo Hornets ka hor inta aanu isku diyaarin finalka FA Cup oo ay Chelsea ku ballansan yihiin.
Aston Villa ayaanay ciyaarteedu u cuslayn sida ta Watford oo kale, waxaanay u tegaysaa West Ham oo Manchester United barbarro lasoo gashay Arbacadii laakiin iyaga naf ahaantooda uu waqtigu ku xumaa.
Haddaba, Khabiirka BBC Sports ee Mark Lawrenson ayaa soo saaray saadaashiisa ugu dambaysa xili ciyaareedkan, waxaanu qalbi jab usii sheegay kooxaha dagaalku u dhexeeyo qaarkood, kuwo kalena waxa uu ugu bushaareeyey farxad.
Mark Lawrenson waxa uu guulo usii saadaaliyey Manchester United iyo Chelsea oo uu u sheegay inay kaalmaha saddexaad iyo afraad kaga dhamaysan doonaan horyaalka oo ay Champions League ka qayb-geli doonaan xili ciyaareedka dambe, halka Leicester City uu qalbiga ka jabiyey, una tilmaamay Europa League.
Wolves ayaa uu iyadana niyadda kaga sii ciyaaray maadaama ay Chelsea u tegayso, halka Tottenham ay booska lixaad soo geli doonto, sida uu khabiirku saadaaliyey.
Kooxaha boosaska hoose ku jira, waxa uu farxaddii u weynayd u saadaaliyey Aston Villa oo uu tilmaamay in inkasta oo lagaga badin doono 2-0 haddana ay dhaami doonaan Watford oo uu tilmaamay in iyagana ay Arsenal 2-0 ku garaaci doonto, sidaa darteedna ay Villa farqi hal gool ah kusoo gudbi doonto.
Saadaasha Khabiirka BBC Sports ee Mark Lawrenson oo dhamaystiran
West Ham 2-0 Aston Villa.
Haddaba akhriste; adiguna saadaali kulamada ugu dambeeya ee horyaalka Premier League, haddii aad ku raacsan tahay khabiirka iyo waxa aad kaga duwan tahayba. Farriintaada ku qor halka hoose ee falanqaynta loogu talo-galay.
✔Arsenal 4-0 Watford
✔Burnley 1-1 Brighton
✔Chelsea 1-2 Wolves
✔Crystal palace2-2 Tottenham
✔Leicester city 2-0 Man United
✔Norwich city 0-5 Man city
✔New Castle 0-3 Liverpool
✔Southampton 3-1 Sheffield United
✔Aston villa 1-1 West ham United
Arsenal 2=2 watford
Burnley 2=3 Brighton
Chalsea 2=3 wolves
Crystal place 2=2 tootenham
Everton 3=1 Bournmouth
Leicester city 3=2 man united
Norwich city 1=3 man city
New castle 1=3 liverbool
Southmton 2=3 shiffield united
Aston villa 3=2 west ham
Arsenal 3.1 watford
Burnley 2.2 brighton
Chalsea 2.0 wolves
Crystal place 1.3 tootenham
Everton 2.1 bournmouth
Leicester city 2.1 man united
Norwich city 0.4 man city
New castle 0.2 liverbool
Southmton 3.2 shilffield united
Aston villa 1.1 west ham